Weellisaa Haacaaluu Hundeessaa: ‘‘Eenyutu Waddeessa eenyutu Jaldeessa?’’ - BBC News Afaan Oromoo
Hacaaluun sirboota qalbii ummataa hawwatan weellisuun gurra horate
Sirbi qeenxee mata duree 'Jirra' jedhuun weellisaa Haacaaluu Hundeessaan tibbana gadi dhiise gamanumaan jaalatamumma guddaa horateera.
Weellisaa Daawitee Makonnin fakkeenya isaa kan godhate Hacaaluun muuziqaan hiree ganamaa isaa akka ta'e amana. ''Ijoollummaakooti kaasee afaan gabii nan qabu, inuman sirba,'' jedha.
Bakka dhaloota isaa magaalaa Ambootti jabbileefi loon tiksee guddachuun isaa kennaa isaa akka cimsatu isa gargaareera. Naannoo manneen barnootaafi gumiiwwan keessatti sirbuu itti fufe.
Abbaan isaa obbo Hundeessaa Boonsaa kana hin jaalanne. Addee Guddattuu Horaan garuu gammadoo turan. ''Abbaan koo doktarummaa fi pirofeesarummaa kana jaalata. Sirbituun mana hin godhattu alalee taati,'' jechuu isaanii har'as yaadata.
Hidhaan Qoraasuma Dhiiraati
Weellisaa Hacaaluun barataa sadarkaa lammaffaa ta'ee wanti isa mudate jireenya isaa jijjiireera. Umurii waggaa 17'n, A.L.I bara 1995 hanga 2000'tti karchallee Amboo keessa ture. Shakkamee akka hidhame dubbata.
''Akka barataa Oromoo tokkotti waanuma barataa Oromoorra gahuutu narra dhaqqabe. Kan biraa wanti haaraa hin jiru'' jedha.
Karchallee Amboon alatti Finfinnee dhufees torban tokko Ma'ikalaawii ture. Yeroo kana mara garuu abbaan isaa gaafa dubbisuu dhufan, ''Jabaadhu gurbaa, hidhaan qoraasuma dhiiraati!'' jedhuun ture.
Sirbuu isaa jibbanis ijoollummaan hidhaatti hamileen isaa caba jedhanii sodaatani.
Manni hidhaa garuu waan abbaan isaa isarratti jibban akka guddifatu isa gargaare. Hacaaluun mana hidhaatti ogeessa muuziqaa ta'e.
''Isa dura ani sagaleedhaan weellisuu malee walaloo fi yeedaloo barreessuu hin beeku ture. Kanan bare mana hidhaa sana keessatti.
Albama jalqabaa keessaa sirboota sagal achittin fixee bahe. Walaloos yeedaloos barreessee.'' jedha.
Manni hidhaa Amboo Haacaaluuf mana barumsaa ture. Namoota gurguddaarraa akka galaa galaafate yaada qaba. Akka abbaan jedhanis qoraafameera.
Sirbi qeenxee 'Jirra' jedhu Hacaaluun haaraa gadhiise jaalatamee jira
''Hamma tokko bilchaadhe akkan bahu na godhe. Waan hunda of-eggannoodhaan akkan raawwadhu na taasise.''
Abbaan isaa har'as karaa ilmi isaanii filatetti hin amanne. Daandiin isaa barumsa akka ta'u yaalaniis hin taane. Isaaniis innis yaada hin kaasne.
Gammachuu hin qabani jechuummoo miti. Sirba weellisaa hangafaa Wasanuu Diidoo, Jabbilootakoo, gaafa sirbe guddaa gammadani. Ilma abbaa caaletti fudhatani.
''Guddattuu, Ilmikee reefu sirbite!'' jechuu isaanii harmee isaarraa dhagaheera. Amma garuu Obbo Hundeessaan ilma dhalchan dhaalsisaniiru. Amma Hacaaluun kan uummata Oromooti.
Wallee fi Siyaasa
Artiistota Oromoo hedduuf walleen waan weellisanii biraa galan miti, aarsaa qaba. Yeroo dheeraa eegalee kan ture. Egaa Hacaaluun kanatti dabalame.
Sagaleen isaa qarree keessa hin turre. Dafee gurra uummataa seene. Kanaafimmoo ergaa fi hiikni walleen dabarsu akka jaalatamuuf guddaa gumaatuu mala.
Maqaa isaatiin albamii lama qaba; 'Sanyii Mootii' fi 'Waa'ee Keenya'. Ergasii booda garuu sirba qeenxeerratti xiyyeeffate. Guddaas milkaa'eera.
Sirbi qeenxee isaa Maalan jiraa, waggaa lama ol dura gad-lakkifame har'as jaalatamaadha.
Sirbi qeenxee 'Jirra' jedhu haaraa gadi dhiifames gamanumaan jaalatamummaa argachaa jira.
Madda suuraa, Tesfaye Afewerk
Weellisaa Hacaaluu Hundeessaan mata dureewwan qalbii ummataa qaban wellisuun gurra horate
Muuziqaan garuu isaaf maali? Hacaaluun yoona fuula guure.
''Muuziqaan anaaf jireenya kooti. Firan itti horadhes, diinan itti horadhes. Muuziqaan ana keessa kooti. Akkaataa jiruufi jireenya saba kiyyaa kanan itti ibsu, quuqama garaa kiyyaa kanan itti baasu. Muuziqaan waan hunduma kiyyaa anaaf.''
Aartiin daawwitii uummataati. Gaafa aartiin waan uummata quuqe as baase, uummannis hagasuma deebisa. 'Maalan Jiraa' yeroo Hacaaluun gadhiisu hagana jaalatama jedhee hin tilmaamne ture.
''Maalan jiraa waanuma keessa kiyyaan barreesse. Uummanni battalatti galeeraaf. Kaanis gaafatee galeef. Kanammoo uummanni baruun anaaf gammachuudha.''
Namoonni hedduun kanneen Afaan Oromoo hin dhageenye dabalatee Hacaaluu weellisaa siyaasaatti fudhatu. Innis kana quba qaba. Ta'us, itti hin dhimmu.
''Ani nama siyaasaa miti. Artistii Oromooti. Jiruufi jireenya hawaasaa walleetiin xiinxaluun nama siyaasaa hin taasisu. Yoo jedhanis immoo hin jibbu. Ishoo jedheen jalaa qaba.''
Biyya Tokkon qaba
Weellisaa Hacaaluuf fakkeenya ta'e dabalatee weellistoonni Oromoo danuu biyya abbaa isaaniirraa fagaatani biyya ormaa jiraatu.
Hedduun isaanii yoo boqotan malee, jiraa biyyatti deebi'aa hin jiran. Kanaafi fakkaata hedduun namaa Hacaaluun biyya keessa jiraachuu isaatti kan raajeffaman. Isaaf garuu akkanatti yaaduutu raajiidha.
Yeroo konsartiif Ameerikaa dhaqe achitti hafa jedhanii kan eegan turan. Garuu hin taane.
''Ani biyya abbaakoottin deebi'e, ajjeesee biyyaa hin baane. Akka artiistii tokkotti waan natti dhagahamen sirbe. Gara fuuladuraattis nan sirba. Biyyaa baqachuun dhaloota kanarratti dhaabachuu qaba.''
''Kanarrammoo eenyutu Waddeessaa eenyutu Jaldeessa? Eenyu waddeessa ta'e ari'a, eenyu Jaldeessa ta'e baqata jedhu ijoolleen Waddeessaa ennaa xiiqeffatan," jedha.
Warri sirna darbeef dibbee dhahaniyyuu biyya keessa jiraatu keenya addatti maali? Kana uummanni keenya baruu qaba.''
Haacaaluun akka weellistoota durii wallee isaanii raadiyoorratti dhagahanii gammadanii miti. Miidiyaaleen hedduun walleewwan isaa lagatu.
Hin taphachiisan. Uummata sirbuuf biraan hin gahan. Ta'us isaaf rakkoo miti.
Walleewwan Hacaaluu miidiyaalee biyya keessa jiraniin erga lagatamee waggaa shan ta'uuf jedha
''Waggaa afur darbeera shanaffaaf deema. Maaliif akka hin taphachiisne isaantu beeka. An dhimmakoo miti. Na yaaddessees hin beeku nan yaaddessus. Maaliif jennaan teeknoolojiidhaaf.''
Affeeruu dhabuu isaanitti isaantu miidhama jedha.
Sababa kanaaf miidiyaaleen hawaasaa kanneen akka weellisaa Haacaaluufi kaaniif kennaa guddaa dha. Walleewwan isaanii haala salphaadhaan akka uummanni dhagahu godhaniiru.
Weellisaa Haacaaluun sirba qofaa miti jaalalayyuu ijoollummaatti eegale. Amma bultii horateera. Haati warraa isaa Faantuu Damissoo Diroo ogeettii fayyaati.
Intala tokko, (Wabii kan jedhamtu) waggaa lama dura godhataniiru. Ammatti ishiin mucaa guddisuuf hojii dhaabde. Sirbi isaa ''Olmaan kee natti ulfaate'' jedhus jaalallee isaaf sirbame.
''Erga bultiin walitti dhufnee waggaa torba. Erga jaalalaan walitti dhufne garuu waggaa 15 ol. Ayyaana isheetiin naa milkaa'a. Baay'een ishii jaaladha," jedha.
Haacaaluun yeroo dhihoo keessatti koonsartii guddaa qopheessuuf yaada qaba.
Leedii Gaagaa nama sarootashee hataman deebiseef dolaara miliyoona walakkaa kennuuf